ကိတ်မုန့်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ, ချဉ်မုန့်နဲ့ထောပတ်မုန့်နှင့်အတူ "နပိုလီယံ" - ချက်ပြုတ်နည်းများ puff pastry နှင့်မုန့်ဖုတ်ဘို့မပါဘဲ
ကိတ်မုန့် "နပိုလီယံ" - အရသာအချိုပွဲချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်၏မူလဗားရှင်း
ကိတ်မုန့် "နပိုလီယံ" - နာမည်ကျော် eponymous ခဲဖွယ်စားဖွယ်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ။ အချိုပွဲ, စမ်းသပ်မှု options နဲ့အဆာ၏သောင်းချီရေတွက် "ဆွေမျိုး" အဆောက်အဦးနှင့်အရသာ၏အရည်အသွေးအချက်ယုတ်ညံ့သည်မဟုတ်အသုတ်နှင့်တင်သွင်းခဲ့တဲ့အနိုင်ရတဲ့။ အခုတော့အိမ်ရှင်မ၎င်း၏ Goodies ၏တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းအပိုင်းအစများ၏ရှေ့မှောက်၌ထားဧည့်သည်တစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်မှဖြည့်တင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကိတ်မုန့် "နပိုလီယံ" ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မူလစာမျက်နှာ "နပိုလီယံ" - အမည်တူ၏ကိတ်မုန်၏ပြင်ဆင်မှုအဘို့အပြီးပြည့်စုံအခြေစိုက်စခန်း။ လိုအပ်သမျှသော - မုန့်ညက်, မာဂျ, ​​ကြက်ဥ, ရှာလကာရည်နဲ့ရေထဲကနေမုန့်စိမ်းသော့ပွငျ။ , တစ်နာရီထိုသို့ Cool ပါးလွှာသောအလွှာထဲမှာလိပ် 4, တန်းတူအစိတ်အပိုင်းများသို့ဖြတ်ခြင်း, အတိုင်းအတာကိတ်မုန့်အရသိရသည်။ အဲဒီနောကျ, မီးဖို၌ fluff မုန့်ဖုတ်ခြင်းနှင့်စုဝေး။
ကိတ်မုန့်ဖို့ puff pastry ၏ "နပိုလီယံ" အဖြူရောင်မုန့်ညက်နှင့်မာဂျမြင့်မားတဲ့အဆီ content တွေကိုအသုံးပြုစိမ်းလန်းစိုပြေခြင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းလှည့်။
အအေးမိခန်းထဲမှာအအေးထုတ်ကုန်များထုတ်အလျင်အမြန်အကြံပြုမုန့်စိမ်းပွား။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူက "float" ဦးမည်နှင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။
အချော puff pastry ကနေကိတ်မုန့် "နပိုလီယံ"
မူလစာမျက်နှာ custard နှင့်အတူ "နပိုလီယံ" အဘယ်သူ၏ပြင်ဆင်မှုထက်နည်း 60 မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်စတိုးဆိုင် puff pastry မှကိတ်မုန်၏စစ်မှန်သောမဟုတ်သောအရာ, အချိန်တွေအများကြီးကြာပါတယ်။ စက်ရုံရိတ်သိမ်းသည့်ငွီးငှေ့ဖှယျရောစပ်ဖယ်ရှားနှင့် 20 မိနစ်မီးဖို၌စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်မုန့် puff အပြိုင် Place boxes တွေကိုလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။
puff pastry စာရွက် -4PCs; ။
နို့ - 1.4 ဌ;
အနှစ် -7PCs; ။
သကြား - 350 ဂရမ်;
မုန့်ညက် - 100 ဂရမ်
သကြား, နို့နှင့်မုန့်ညက်နှင့်အတူကြက်ဥအနှစ် Whisk နှင့်ချက်ပြုတ်။
220 ဒီဂရီ 25 မိနစ်မှာ segments များ shortcakes နှင့်မုန့်ဖုတ်ဖြတ်ယူပါ။
Sformuyte puff ကိတ်မုန့် "နပိုလီယံ" နှင့်ရေခဲသေတ္တာ။
မုန့် "နပိုလီယံ" အများအပြားအိမ်ရှင်မများ၏မျက်နှာသာအတွက်နို့ဆီနဲ့ထောပတ်နှင့်အတူ။ သူကအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်, အစဉ်အမြဲအရသာထွက်လှည့်နှင့်၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုအထူးဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျစရိတ်မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်ရုံထောပတ်နှင့်တော၌ထားသောကိတ်မုန့်နှင့်အတူသိပ်သည်းနို့ရိုက်နိုင်ပေမယ့်သူက သာ. ကြီးမြတ်လွယ်ကူခြင်းအဘို့အ သာ. ကောင်း၏, အလေးချိန်၏လျှပ်နှင့်တည်ငြိမ်ရေးအမှုန့်သကြားနှင့်အတူမုန့်မှထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ရေနံ - 450 ဂရမ်;
sgushchenka - 190 ဂရမ်;
powdered သကြား - 100 ဂရမ်
မုန့်ညက်အကြွင်းအကျန်များ, ကြက်ဥ, ဆားတစ်ဦးဖြစ်တော့မုန့်စိမ်းဒုတိယအကြိမ်ကြည့်ပွား။
180 ဒီဂရီ 15 မိနစ်မှာ6ဝေမျှနှင့်မုန့်ဖုတ်သို့ဖြတ်ယူပါ။
အဆိုပါအမှုန့်နှင့်နို့ဆီနှင့်အတူကျန်ရှိသောရေနံ Whisk ။
နာရီအအေးပြီးနောက်မုန့်နှင့်အတူဝေမျှ Cut နှင့်ကိတ်မုန့်အစေခံ "နပိုလီယံ" ။
အိမ်တွင်းဒိန်ခဲမုန့်နှင့်အတူ "နပိုလီယံ" အပျော်အပါးတွေနဲ့စီးပွားရေးပေါင်းစပ်။ မုန့်ဒိန်ခဲအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရသာမတူအခြေစိုက်, ဗီတာမင်တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်နှင့် dietetic ထုတ်ကုန်ကပိုင်ဆိုင်သည်။ နပိုလီယံမူကြိတ်ကိတ်မုန့်အဘို့, ဒိန်ခဲအချဉ်မုန့်နှင့်အတူပေါင်းစပ်။ ဒါကမုန့်တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်မြင့်မားသော impregnability ရဖို့ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
မုန့်ညက် - 600 ဂရမ်;
ရေ - 150 ဂရမ်;
ရေနံ - 300 ဂရမ်;
ရှာလကာရည် - 10 ml ကို;
မုန့် - 400 ဂရမ်;
ထောပတ် - 450 ဂရမ်;
သကြား - 250 ဂရမ်
ရှာလကာရည်, ရေ, ကြက်ဥ, ဆီနဲ့မုန့်ညက်ရောမွှေပါ။
5 မိနစ် 200 ဒီဂရီမှာကိတ်မုန့်နှင့်မုန့်ဖုတ်ထဲသို့မုန့်စိမ်းလှိမ့်ပုံ။
အိမ်တွင်းဒိန်ခဲနဲ့သကြားနှင့်အတူချဉ်မုန့် Whisk ။
5 ပြီးနောက်နာရီနှင့်နှစ်ပိုင်းဖြတ်စားပွဲမှထောပတ်ကိတ်မုန့် "နပိုလီယံ" ဝတ်ပြုကြလော့။
berry သီးမုန့်နှင့်အတူကိတ်မုန့် "နပိုလီယံ"
ကိတ်မုန့် "နပိုလီယံ '- ဒီပြင်ဆင်မှု၏သောင်းချီရှိခြင်းစာရွက်။ ယနေ့တစ်ဖက်ရှင်အလင်းနှင့်ပျော့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အရသာအတွက်ဒါ berry သီးအဆာအပေါ်ခေတ်သစ် confectioners slant လုပ်ပါ။ သူတို့ဟာအပိုင်း, အနိမ့်ကယ်လိုရီအတွက်အံ့မခန်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ cloying လန်းဆန်းချဉ်ဓာတ် diluting, ဂန္လိမ်းဆေးနှင့်အတူဿုံသွားပါ။
သီး - 550 ဂရမ်;
အနှစ် -4PCs; ။
ကစီဓါတ်ပါ - 20 ဂရမ်,
powdered သကြား - 100 ဂရမ်;
မုန့် - 200 ml ကို။
berry သီးသကြား 10 မိနစ်ပြုတ်။
220 ဒီဂရီ 10 မိနစ်မှာမုန့်စိမ်း segments များနှင့်မုန့်ဖုတ်ဖြတ်ယူပါ။
250 ml ကိုနို့မှုန့်နှင့်အတူတက်နွေး။
နို့ကိုအရာကြွင်းလေကစီဓါတ်များနှင့်ကြက်ဥအနှစ်နှင့်အတူ whisk ။
"နပိုလီယံ" choux မုန့်စိမ်း
"နပိုလီယံ" ကိတ်မုန့်ဟင်းချက်သည့်ဂန္အစိတ်အပိုင်းများကိုကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ မယုံနိုင်လောက်အောင်အရသာနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအချိုပွဲ choux pastry ထားနိုင်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကရေခဲသေတ္တာထဲမှာ "အဘယ်သူမျှမကြွင်းသောအရာ" ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိမ့်ဆုံးအစားအစာဖွဲ့စည်းမှု, ချက်ပြုတ်၏ရိုးရှင်းနှင့် Rapid, captivating နှင့်ချက်ချင်းဖုတ်။
သကြား - 110 ဂရမ်;
ကစီဓါတ်ပါ - 60 ဂရမ်,
သံပုရာအခွံ - 20 ဂရမ်,
သံပုရာဖျော်ရည်ကို - 40 ml ။
မုန့်ညက်, နို့၏တစ်ဝက်တစ်ဖန်, ထောပတ်, တစ်ဝက်သကြားနဲ့ကြက်ဥမုန့်စိမ်းဘီယာအရက်ချက်၏။
180 ဒီဂရီ 10 မိနစ်မှာ roll7အလွှာများနှင့်မုန့်ဖုတ်။
ပူနွေးတဲ့သကြားဓာတ်အကြွင်းအကျန်နှင့်အတူနို့, ကြက်ဥဝင်, ကစီဓါတ်များနှင့်ဆင်းပြုတ်။
အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုထဲသို့မုန့် Divide ။ တဦးတည်းမှာ zest နှင့်ဖျော်ရည်ထည့်ပါ။
အချဉ်မုန့်နှင့်အတူ "နပိုလီယံ" - တဲ့အကြိုက်ဆုံးအိမ်လုပ်၎င်း၏ Goodies ။ ကြောင့်အဘယ်သူ၏အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်ထူးခြားသောအရည်အသွေးတွေကိုနေရာတစ်နေရာရှာတွေ့ခြင်းနှင့်မုန့်နှင့်မုန့်စိမ်း၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်အချဉ်မုန့်, ရန်, အချိုပွဲလူတိုင်းလက်လှမ်းဖြစ်လာသည်။ တစ်ဦး, နူးညံ့သိမ်မွေ့မှန်မှန်နဲ့ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရသာရှိတဲ့ - အထူးသဖြင့်အချဉ်မုန့်နှင့်အတူကိတ်မုန့်စိမ်းလန်းစိုပြေခြင်းနှင့် airy ရယူလျက်, မုန့်လို့ပဲ။
မုန့် - 900 ဂရမ်;
မုန့်ညက် - 750 ဂရမ်;
သကြား - 325 ဂရမ်;
soda -5ဂရမ်
200 ဂရမ်သကြားဓာတ်၏အချဉ်မုန့်, ဆိုဒါ, မာဂျ, ​​မုန့်ညက်, ကြက်ဥ, 75 ဂရမ်ချိတ်ဆက်ပါ။
200 ဒီဂရီ 10 မိနစ်မှာမုန့်စိမ်း segments များနှင့်မုန့်ဖုတ်ဖြတ်ယူပါ။
နှင်တံမုန့ 700 ဂရမ် 250 ဂရမ်သကြားဓာတ်။
"နပိုလီယံ" ဟုအဆိုပါကိတ်မုန့်, ​​စည်းဝေးစိမ်မုန့်ကိတ်မုန့်။
mascarpone နှင့်အတူ "နပိုလီယံ"
ဒဏ်ငွေအချိုပွဲ၏ရည်းစားအယူခံဖွယ်ရှိကြော်မုန့် "နပိုလီယံ" mascarpone ။ ပင်မုန့်ဒိန်ခဲသိသိသာသာ "တော်တော်တစ်ပြားက" စဉ်းစား, များစွာသောအိမ်ရှင်မကစည်းကမ်းအတိုင်း, ကရိုက်ဘူး, ရိုးရိုးအခြားခင်းကျင်းသို့နှိုးဆော်ထားတဲ့ကာလအတွင်း creamy texture, ပြင်ဆင်မှု၏ချိုမြိန်အရသာနှင့်လွယ်ကူခြင်း, ကြိုက်တတ်တဲ့။
mascarpone - 700 ဂရမ်;
powdered သကြား - 170 ဂရမ်;
မုန့် - 450 ml ကို;
ရှာလကာရည် -5ml ကို;
ရေ - 125 ml ကို။
ရေ, ရှာလကာရည်, မုန့်ညက်နှင့်ကြက်ဥနှင့်အတူထောပတ်ပွတ်ပေးပါ။
200 ဒီဂရီ 10 မိနစ်မှာ7အလွှာများနှင့်မုန့်ဖုတ်သို့လိပ်မုန့်စိမ်း။
အဆိုပါ icing နှင့် mascarpone နှင့်အတူမုန့်နှင်တံ။
, မုန့်၏ promazyvaya အလွှာ "နပိုလီယံ" ဟုအဆိုပါကိတ်မုန့်ကိုစုဝေး။
ထောပတ်မုန့် "နပိုလီယံ" မတူကွဲပြားသောအပွောငျးအလဲအဘို့။ ဤအမျိုးအစား custard မုန့်သက်ဆိုင်နှင့်နို့ဆီ, အိမ်တွင်းဒိန်ခဲနှင့်တည်ငြိမ်လိမ်းဆေးနှင့်အတူချိုမြိန်။ သို့သော်ထုတ်ကုန်အတွက်အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးအရသာမုန့်နှင့်အမှုန့်သကြားကြာပွတ်ခံရဖို့စဉ်းစားသည်။ သင်တစ်ဦးအဆီမုန့်နှင့်ခိုင်ခံ့သောအေးမြသူတို့ကိုမဝယ်လျှင်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့် Whisk ။
မုန့် - 600 ml ကို;
powdered သကြား - 250 ဂရမ်;
ရမ် - 20 ml ကို;
puff pastry စာရွက် -3အပိုင်းပိုင်း။
220 ဒီဂရီ 15 မိနစ်မှာမီးဖိုနဲ့မုန့်ဖုတ်ထဲမှာမုန့်စိမ်းဝေမျှခုတ်ဖြတ်။
ယင်းချောဆီအရည်ကြည်မုန့်တစ်ဦးချင်းစီ layer သည်ကိတ်မုန်စုဆောင်းပါ။
ကို "နားရွက်" ဘီစကွတ်၏ပျင်းရိ "နပိုလီယံ"
မုန့်ဖုတ်ခြင်းမရှိဘဲ "နပိုလီယံ" - Battery ကိုအတူရှုပ်ထွေးချင်ကြဘူးသောသူတို့အဘို့တစ် godsend ။ ဤသည်နှင့်မကျင့်ရန်ရှိသည်, ကိတ်မုန့်, အချိုပွဲအဖြစ် puff pastry "နားရွက်" အကြောင်းမူကား, မူရင်းမှအများဆုံးဆင်တူစေနှင့်, custard အဆိုပါဂန္ "ဆွေမျိုး" ၏တစ်အရသာကိုငါပေးမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အားလုံးအပေါ်အကြောင်းကိုအားလုံးအချိန်မရှိခြင်းကြောင့်လွယ်ကူသောအောင်, ထက်ပိုမမိနစ် 30 ယူပါလိမ့်မယ်။
ဘီစကွတ် - 1 ကီလိုဂရမ်;
နို့ - 700 ml ကို;
မုန့်ညက် - 120 ဂရမ်
သကြား, နို့နှင့်မုန့်ညက်နှင့်အတူကြက်ဥ Whisk ။
အသီးအသီးမုန့် smearing cookies တွေကိုအလွှာထားပါ။
အချဉ်မုန့်ကိတ်မုန့် - ဟာဂန္စာရွက်
မီးဖို၌ဖုတ်ဖက်ထုပ် - စာရွက်
အိမ်မှာ mascarpone နှင့်အတူ tiramisu အဘို့အကြော်
စတိုင်နောက်ပြီး 2018 - ရေတိုနှင့်တာရှည်လက်သည်းပေါ်တွင်ရာသီသစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးများ
Selena Gomez မဟုတ် Bieber ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့အမိနှင့်အတူပဋိပက္ခ၌တည်ရှိ၏
ရတဲ့အရာတွေမျက်နှာကျက်: အကောင်းအဆိုး cons
ရေရှည်ဥယျာဉ်ကို geranium - တန်း
မီးဖိုချောင် worktops - ညာဘက်ရွေးချယ်မှုလုပ်ဖို့ဘယ်လို?
ကျွန်မ TV ကိုတစ်ဦးမွေးကင်းစစောင့်ကြည့်နိုင်ပါသလား?
အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသင်ကစားပွဲအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှ